Fihetsiketsehana amin'ny toetrandro hanohanana ny Ja Ja, fa tsy Blah Blah, Generation Vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Awards » Fihetsiketsehana amin'ny toetrandro hanohanana ny Ja Ja, fa tsy Blah Blah, Generation Vaovao
Awards • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • ICTP • Vaovao • People • Tourism • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny mpiasan'ny Centre for Responsible Travel (CREST) ​​sy ny Board of Directors dia nanomboka ny mari-pankasitrahana isan-taona Martha Honey Legacy tamin'ny taona 2019 ho fomba iray hahafantarana olona iray amin'ny indostrian'ny fizahantany manerantany izay manisy fiovana lehibe amin'ny fanosehana ny valopy amin'ny fivezivezena tompon'andraikitra.
Ny valisoa dia manaiky ny fizahan-tany fizahan-tany maintso nandritra ny fotoana ela ny fitarihan'i Martha Honey, izay nanomezana azy ny voninahitra.
Martha Honey dia mpiara-manorina ary talen'ny Emeritus ao amin'ny Center for Responsible Travel (CREST), monina any Washington, DC.
Nandritra ny roapolo taona lasa, nanoratra sy nanao lahateny betsaka momba ny tontolo iainana izy, ny fizahan-tany fizahan-tany, ny fizahan-tany fitsangantsanganana ary ny fizahan-tany, ny fiovan'ny toetr'andro ary ny olana momba ny fanamarinana.
Tamin'ity taona ity, Andriamatoa Geoffrey Lipman, mpiara-manorina ny SUNx - Strong Universal Network, ary ny filohan'ny Mpiara-miombon'antoka momba ny toetrandro sy fizahantany iraisam-pirenena (ICTP), dia nambara ho 2021 nahazo ny loka 2021 Martha Honey Legacy Award avy amin'ny CREST.
Ireto misy fanamarihana nataon'i Andriamatoa Lipman momba ny fahazoana io mari-pankasitrahana io:
Te-hisaotra an'i CREST aho noho io loka malaza io ary hanaiky ny fitarihan'ny fizahan-tany maintso nandritra ny fotoana ela an'i Martha Honey, izay nomena azy io. Faly aho fa nivarotra ny eritreritra isika tamin'ny vanim-potoana sivily kokoa tamin'ny voalohan'ny taona 1990 fa tsy tao amin'ny tontolon'ny Trump ankehitriny, fankahalana voan'ny aretina, Trump. Io dia namela anay ho tonga amin'ireo olana mitovy amin'ny fomba fijery tsy mitovy, miaraka amin'ny fahalalam-pomba sy ny fahalalam-pomba.
Manaiky ny loka aho, tsy ho an'ny tenako loatra, fa ho fanekena ny aingam-panahy azoko tamin'ny namako sy ny mpanolotsainy nandritra ny 25 taona, ilay tara Maurice Strong - maharitra sy mpikatroka ny toetrandro antsasaky ny taonjato lasa izay.
Ary gaga aho amin'ny zava-bitany teo amin'ny sehatra manerantany.
Ilay Maurice Strong ihany izay nikarakara ny Fihaonana an-tampon'ny tany tamin'ny 1972 sy ny Fihaonamben'ny tany tany Rio 1992 - misy lohandoham-panjakana 124. Iza no namolavola ny fahaterahan'ny UNEP, ny IPCC, ny UNFCCC, ny Earth Charter, ary ny fanomezana an-tapitrisany dolara an'i Ted Turner ho an'ny UN Foundation. Ary azo lazaina fa nanana dian-tanan'ny MDG, ny SDG, ary ny Paris Climate Accord.
Tahaka ny nahitana ny fahitany tao anaty ADN an'ny SUNx Malta, lova iray ho azy eo amin'ny sehatry ny Travel & fizahan-tany, ONG monina any EU, niara-niasa tamin'ny governemantan'i Malta handroso Fitsangatsanganana am-pitiavana amin'ny toetrandro.
Ny hafatro anio, avy amin'ny SUNx Malta, miaraka amin'ny fankasitrahako ny CREST amin'ny loka, dia misy teboka telo.
Voalohany, ilaina ny krizy momba ny toetrandro - io no tokony hifantohantsika voalohany. Ary mila izany izao. Ity no taona mafana indrindra tao amin'ny fahatsiarovana vao tsy ela akory izay, miaraka amin'ny fiatraikany mahatsiravina indrindra manerantany. Ny làlan-kivoakan'ny 2030 amin'izao fotoana izao dia fiakarana 16% fa tsy ny fihenan'ny 50% ilaina mba hijanonany amin'ny lalana hatrany amin'ny fetra 1.5 degre.
Roa, ny fanambarana momba ny fizahan-tany ao Glasgow dia dingana iray mankany amin'ny lalana marina, saingy tsy maintsy mandroso lavitra isika, haingana kokoa. Mila DASH-2-Zero, Net Zero Carbon 2030 fa tsy 2050 ary amin'ny 2050 (3 am-polony miala) dia mila No GHG isika. DASH dia midika hoe Declare: Act: Support and Hope.
Telo, ny fanantenantsika tsara indrindra dia ny Tanora, izay nilaza toa an'i Greta Thunberg fa tsy maintsy manadio ny korontana. Ny tanora ankehitriny dia ny Ja Ja - Eny afaka mamorona isika. Tsy ilay bla bla - araka ny resahan'i Thunberg antsika. Horaisin'izy ireo ny hetsika henjana ilaina hiatrehana ny krizy amin'ny toetrandro - satria tsy hiala io.
Ary tsy maintsy omentsika azy ireo ny Fanohanana sy fanantenana izay mendrika azy ireo.
Araka ny lazain'ny Innuits, "Tsy mandova ny tany amin'ny razantsika isika, fa mindrana izany amin'ny zanatsika." Misaotra anao
Momba ny SUNx Malta
SUNx dia fikambanana miorina amin'ny EU, tsy mitady vola, natsangana ho lova ho an'i Maurice Strong, mpisava lalana amin'ny toetr'andro sy maharitra ary niara-niasa tamin'ny governemanta Malta.
SUNx Malta dia namorona ny "Green & Clean, Climate Friendly Travel System" izay natao hanampiana ireo orinasam-pitetezana sy fizahan-tany sy vondrom-piarahamonina hiova amin'ny Toekarena vaovao momba ny toetr'andro. Ny programa dia mifototra amin'ny fampihenana ny karbaona, ny fihaonana amin'ny tanjona kendrena maharitra, ary ny fampifanarahana ny làlan'ny Paris 1.5C. Izy io dia hetsika mifantoka amin'ny fanabeazana - manohana ireo orinasa sy vondrom-piarahamonina ankehitriny hanatanteraka ny hetahetan'ny toetrandro ary hampirisika ireo tanora mpitarika rahampitso hiomana amin'ny asa mahafa-po manerana ny sehatry ny fizahan-tany. Ny mpiara-manorina azy ary ny filoham-pirenena dia ny Profesora Geoffrey Lipman.
SUNx Miantso DASH-2-Zero i Malta ho an'ny sehatry ny Travel & fizahan-tany manan-kery. Manosika hetsika haingana kokoa. Eny, amin'ny Net Zero Carbon, fa amin'ny 2030 ary ny fanoloran-tena amin'ny TSY entona entona miorina amin'ny 2050. Ny DASH dia midika hoe Declare & Act with Support & Hope. Masoandrox Malta dia mampiofana ho Tompondakan'ny toetrandro mahery 100,000 mahery manerana an'i Etazonia rehetra amin'ny 2030. Miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka Sustainable Development Goal (SDG-17), manolotra mpampifandray UNFCCC izahay Ny fisoratana anarana amin'ny ambition haingana ary fanohanana ireo orinasa sy vondrom-piarahamonina mpinamana.
Raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa, Olly Wheatcroft [email voaaro]
November 21, 2021 amin'ny 23: 31
Hablan de Cambio Climático y la Elite Luciferinas nos gasean todos los día con el “Proyecto HAARP” tamin'ny 20 taona lasa, sy ny osean'ny ranomasina estan llenos de los barriles de residuos de Uranio 238 echados en los mares tanto unises… ..!¡